Gulshan Grover: Laadarka caanka ah ee ay filim jilista la tagtay – Bulsho News
Gulshan Grover: Laadarka caanka ah ee ay filim jilista la...
Gulshan Grover: Laadarka caanka ah ee ay filim jilista la tagtay
Xigashada Sawirka, Bollywood/Youtube
Gulshan Grover oo jilaya filimka Aatish
Jilaaga caanka ah ee shirkadda Bollywood-ka Hindiya, Gulshan Grover, ayaa maalmihii lasoo dhaafay mar kale qabsaday hadal heynta taageerayaasha filimada kaddib markii uu sheegay in ay noloshiisa la tagtay xirfaddiisa.
Wareysi uu dhawaan siiyay qaar ka mid ah warbaahinta Hindiya, oo uu ka mid yahay wargeyska Hindistan Times, ayuu ku sheegay in uusan awoodin fulinta adeegyada caawinta bulshada iyo wax kasta oo kale, “halka arrin ee uu sameyn karana ay tahay jilista iyo madadaalada”.
Waxa uu sheegay in isagu uusan waligiis diiradda saarin, hadda kaddibna isku dayi doonin wax aan ka ahayn madadaalada.
“Waaxda filimada ee Hindiya shaqadeedu waa madadaalo, waxaa naloogu yeeraa majaajiliisteyaal, taasi waa aqoonsigeenna saxda ah, waana waxa aan qaabilsan nahay. Jahwareerku wuxuu ka yimid markii aan noqonnay dad bulshada baddala, oo madadaaladeenna aan ku lifaaqnay howlo isbaddal raadin ah,” ayuu yidhi Gulshan.
Gulshan Grover ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqadiisa, oo uu jecel yahay, si joogto ahna uu diiradda u saaro.
Jilaaga ayaa dad badan ka yaabsaday markii uu sheegay hadallo muujiyay in maskaxdiisa iyo noloshiisa oo dhan ay ku lumeen filimada.
“Waxaan ka shaqeeyaa noocyo kala duwan oo filimo ah. Qof walba wuxuu leeyahay tayo iyo shakhsiyad uu waxyaabo kala duwan ku qabto, balse aniga nasiib darro sidaas ma ihi mana lihi tayadaas. Waxaan hami u hayaa oo kaliya madadaalada. Xitaa waxba kama baddali karo gurigeyga, ama dhismaheyga, wax kale ma taaban karo,” ayuu yiri.
Gulshan oo ay Soomaalidu u taqaanno magacyo kala duwan, sida “Indha Xaraar” ayaa hadda ah 66 jir, walina ma uusan joojinin howsha filimada. Waxa uu dhashay 21-kii bishii September ee sanadkii 1955-kii.
Muddo 40 sano ah ayuu Gulshan ku jiray shaqada jilista waxa uuna kasoo muuqday in ka badan 40 filim oo wada caan baxay.
Doorkiisa ayaa tan iyo billowgii ahaa inuu laadarnimo matalo, waxayna arrintaas u horseedday in lagu naaneyso “Nin Xun” maadaama uu si cajiib ah ugu soo baxo.
Filimkiisii ugu horreeyay oo lagu magacaabo Hum Paanch waxa uu soo baxay sanadkii 1980-kii, markaasoo uu billaabay waayihiisii aan kala joogsiga lahayn ee laadarnimada Bollywood-ka.
Sooryavanshi oo soo baxay 2021-kii ayuu ahaa filimkii ugu dambeeyay ee uu kasoo muuqday.
Hal wiil oo uu carruur dhalay oo lagu magacaabo Sanjay Grover ayaa hadda ka mid ah jilayaasha hadda waxa uuna ku lug leeyahay filimada shirkadaha Bollywood-ka iyo Hollywoodka labadaba.